ILoji e-Indiana Ordnance-Stag kunye neBison Suite
Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguKirsten
UKirsten ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uKirsten iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Ifakwe ngaphandle nje kweDowntown Connersville kwindawo engasese, enesango lokungena emahlathini. Iifestile ezinkulu, iidesika kunye neembono ezintle zikuvumela ukuba uphumle ngoxolo. Ukuloba kunikezelwe kwidama lethu elinempahla! Siyazingca ngoluhlu lokudubula lweemitha ezingama-1500. Khetha kwi-master suite yabucala enebhafu, okanye igumbi lokulala elinoqoqosho elinebhafu ekwabelwana ngayo neendwendwe. Relax phambi kwesinye seendawo zethu zomlilo ezimbini ezinkulu okanye udlale iidati kwigumbi lethu lokuhlala elisezantsi! Abakhathaleli bahlala kwinqanaba eliphezulu lekhaya.
Sinikezela ngendlu yasefama yanamhlanje ivakale ngencasa yesitayile sangaphandle. Vula, uzaliswe ukukhanya kwaye uvuza ngobuhle!
IConnersville, eIndiana yidolophu encinci entle ebekwe kumbindi-ntshona ebonelela ngokupheka kwidolophu yasekhaya, iimarike zoMlimi zininzi, ukubukela iintaka ezothusayo kwiMary Gray Bird Sanctuary, ukufikelela ngokulula kwiindawo zembali ezifana ne "Grand Central Station" ye-Underground Railroad Richmond, IN. Kufuphi iWhitewater River ibonelela ngezinto ezininzi zangaphandle!
Abakhathaleli bahlala esizeni kunye namakhwenkwe abo amancinci amabini, izinja ezimbini, kunye nekati (Nceda uqaphele ukuba ikati ikhululekile ukuzulazula kwiindawo eziqhelekileyo, kodwa ayivumelekanga kumagumbi eendwendwe)! Siyavuya ukwenza ukuba sinqongophele okanye sikunike iingcebiso ngezinto omawuzenze!
Abakhathaleli bahlala esizeni kunye namakhwenkwe abo amancinci amabini, izinja ezimbini, kunye nekati (Nceda uqaphele ukuba ikati ikhululekile ukuzulazula kwiindawo eziqhelekileyo,…